मनोज गजुरेलको बिहेको खबरले मिनाको मन पोलेकै हो त ? किन लेख्छीन् यस्ता स्टाटस- – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारमनोज गजुरेलको बिहेको खबरले मिनाको मन पोलेकै हो त ? किन लेख्छीन् यस्ता स्टाटस-
के हो” भन्ने प्रश्न सहितको स्टाटस लेखिन् । यो गजुरेलको बिहेको खबर पछिको पहिलो प्रहार थियो । त्यसपछि उनले लगातार जसो दिनहुं या भनौं दिनमै ३–४ वटा सम्म स्टाटसले फेसबुकका वाल भरिरहेकी छन् । “हु”र्काएर हात खुट्टा बलिया बनाइदिए पछी, भात पकाएर दिने र बि”रामी हुँदा स्या”हार्ने चाहियो नि बिचारा। क”म्जोर महिला होइन पुरुष हुन। महिला एक्लै सबल छन र सक्षम बन्न सक्छ्न।” “मान्छेको जन्म नौ महिनामा हुन्छ। कुकुरको जन्म तीन महिनामा हुन्छ। हात्तिको जन्म बाईस महिनामा हुन्छ क्यारे होइन ?